Russia oo sheegtey iney soo saareen Dawada corona virus – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Russia oo sheegtey iney soo saareen Dawada corona virus
Russia oo sheegtey iney soo saareen Dawada corona virus
Russia ayaa sheegtay Talaadadii inay sameysay talaalkii ugu horreeyay ee adduunka oo lagu daweynayo xanuunka covi19 “xasaanad waarta” oo looga hortago cudurka ‘coronavirus’, in kasta oo ay sii kordheeyso shakiga laga qabo wax ku oolnimada iyada oo ay jirto cabsi laga qabo mowjadaha labaad ee infekshannada adduunka oo dhan.
Madaxweyne Vladimir Putin wuxuu sheegay in tallaalku uu amaan yahay oo mid ka mid ah gabdhahiisa ay heleen aaladda loo yaqaan “Sputnik” waa guushii labaad ee ruuska kadib dayax gacmeedkii Soviet-ka ee 1950-kii uu direy.
“Waan ogahay inay sifiican wax ku ool u tahay, inay siineyso xasaanad waarta,” Putin wuxuu ka yiri tallaalka ay soo saartay machadka cilmi-baarista Gamaleya ee iskaashiga ay la leedahay wasaaradda difaaca ee Moscow.
Wasaaradda caafimaadka ee Russia waxay sheegtay in inkasta oo tijaabooyinka caafimaad aynan wali dhameystirmin hadana tijaabada ugu dambeysa ee tijaabada ah oo ay ku lug leeyihiin in kabadan 2,000 oo qof ayaa la bilaabayaa Arbacada oo keliya.
Saynisyahannada Reer Galbeedka ayaa hore u soo saaray walaac ku saabsan xawaaraha horumarka ee tallaallada Ruushka, iyagoo soo jeedinaya in cilmi baarayaashu ay goyn doonaan geesaha.
Af hayeenka Ururka Caafimaadka Aduunka ee Geneva Tarik Jasarevic ayaa sheegay inay xidhiidh dhaw la leeyihiin masuuliyiinta caafimaadka ee Russia laakiin ay dhakhso u tahay shay kasta oo ay WHO aqbashay.
“U-qalmitaanka tallaal kasta waxaa ka mid ah dib u eegista adag iyo qiimeynta dhammaan xogta loo baahan yahay ee amniga iyo waxtarka,” ayuu yiri.
Afayeen u hadlay wasaarada caafimaadka Jarmalka ayaa usheegay wargayska RND in “Majirto xog la ogyahay oo ku saabsan tayada, waxtarka iyo badbaadada talaalka ruushka,” isagoo intaa raaciyay “amaanka bukaanka ayaa ah mudnaanta ugu sareysa.”
In ka badan hal bilyan ayaa la diyaariyey
Ruushka wuxuu rajeynayaa inuu bilaabo wax soo saarka bisha Sebtember isla markaana uu bilaabo talaalista shaqaalaha caafimaadka isla markaaba.
Kirill Dmitriev, oo ah madaxa maalgalinta hantida guud ee Ruushka oo gacan ka gaysatay horumarinta talaalka, ayaa sheegay in shakiga laga qabo talaalada inay qayb ka yihiin “isku dubaridid ​​iyo taxaddar ku aaddan weerarada warbaahinta” ee loogu talagalay inay “sumcadda” wadanka.
Wuxuu sheegay in 20 dal oo shisheeye ay horay u sii amreen in ka badan hal bilyan oo qaadasho.
Tartankii tallaalka loogu jiro oo aad u kacey sidii waddammada adduunka oo dhan ugu heelan karaan iney soo saaraan dawo cudur cusub oo dillaaca – xitaa iyagoo isku dayaya inay dib u bilaabaan dhaqaalahii bilooyinkii xannibaadda.
Indonesia ayaa sheegtay Talaadada inay bilaabi doonto wajiga 3aad ee tijaabada aadanaha ee murashaxa talaalka ee Shiinac Biotech ee Shiinaha.
Wejiga 3aad waxaa loola jeedaa tijaabooyinka ku lug leh tiro fara badan oo maaddooyinka imtixaanka aadanaha ah waana tallaabada ugu dambeysa kahor oggolaanshaha sharci.
Tallaalka Sinovac, oo loogu magacdaray CoronaVac, ayaa durbadiiba la baari doonaa 9,000 oo shaqaale caafimaad oo reer Brazil ah.
WHO waxay sheegaysaa in 165 tallaal oo musharrax ah laga shaqeynayo adduunka oo dhan, iyadoo lix ay gaareen Wajiga 3.
Laakiin agaasimaha xaaladaha degdegga ah Michael Ryan wuxuu ka digay in helitaanka tallaal uusan si otomaatig ah ugu noqon doonin dhamaadka COVID-19.
“Waxaan haysannaa tallaallo cudurka dabeysha iyo jadeecada ah oo dhammaystiran, waxaanan wali la halgameynaa sidii aan u tirtiri laheyn ama aan u baabi’in lahayn cudurradaas. Waa inaad awood u siisaa inaad tallaalkaas gaarsiiso dad doonaya oo raba in la siiyo tallaalkaas,” ayuu yiri.
Mowjadaha labaad ‘lama huraan’
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP, tirada la xaqiijiyay infekshannada adduunka oo dhan tan iyo markii fayrasku markii ugu horreysay ka soo shaac baxay Shiinaha dhammaadkii sannadkii hore wuxuu dhaafay 20.1 milyan, iyadoo ku dhawaad ​​737,000 ay u dhintey, tiradaas ayaa la filayaa inay ka badato 750,000 maalmood gudahood.
Wadanka Mareeykanka, oo ah wadanka ugu daran ee dunida ku dhufatay, tirada dhimashada ayaa gaartay 164,480 fiidnimadii Talaadada, iyadoo 1,110 qof oo kale ay ku dhinteen 24-kii saac ee la soo dhaafay, sida uu sheegay tracker-ka Jaamacadda Johns Hopkins. Waxay sheegtay in wadarta guud ee kiisaska cudurka uu hadda yahay 5.14 milyan.
Dhamaadka kale ee bandhiga, New Zealand Talaadadii waxay jabisay wax ka badan 100-maalmood oo qulqulaya iyada oo aan cudurka gudaha lagu kala qaadin coronavirus.
Raiisel Wasaare Jacinda Ardern ayaa yidhi, “Dhamaanteen si adag ayaan uga shaqeynay si aan uga hortagno seenyadaas.”
Illaa iyo hadda, New Zealand ayaa soo sheegtey in 22 qof ay u dhinteen cudurka coronavirus, in kasta oo mas’uuliyiintu dhowr jeer ka digeen in mowjad labaad ay “lagama maarmaan tahay”.
Boqortooyada Himalayan ee fog ee Bhutan ayaa Talaadadii ku dhawaaqday in ay xannibtay coronavirus-kii ugu horreeyay ka dib markii in badan laga difaacay cudurka muddo bilo ah.
Yurub dhexdeeda, wakaaladda caafimaadka ee Midowga Yurub ECDC waxay ku boorrisay wadamadu inay dib ula sooabtaan xakamaynta qaar maadaama kiisaska cusubi bilaabeen inay mar kale soo baxaan.
Faransiiska ayaa dib u soo celiyay xirashada maaskaro meelaha qaarkood oo dadku ku badan yihiin iyo meelaha dalxiis ee caasimada Paris.
Raiiselwasaaraha Jean Castex wuxuu sheegay inuu weydiisanayo mas’uuliyiinta maxalliga ah “in la dheereeyo sida ugu macquulsan waajibaadka ah inay xirtaan maaskaro goobaha dadweynaha”.
Castex wuxuu intaas ku daray in haddii aysan dadweynaha faransiiska wax u qabsan shaqsiyan iyo wadajir, “waxaan nafteenna u gelineynaa halis sare oo ku soo laabashada cudurkan oo ay adkaan doonto in la xakameeyo.”
Dhowr magaalooyin iyo magaalooyin Faransiis ah ayaa horey u adkeeyay xeerarka maaskaro, sida qaybo ka mid ah Belgium, Netherlands, iyo Romania.
Isbaanishka, mas’uuliyiinta ayaa amar ku bixiyay in xiro mashiinka oo dhan lagu xiro meelaha caamka ah iyo gobollada qaar ay dib ugu laabteen xirista.
Corona oo ku sii faafaysaa adduunka .. wararkii ugu danbeeyey iyo Talaal Tijaabo ah oo mareykunku soo saaarey
In "WARARKA MAANTA"
Dalka Brazil ayaa kor u dhaafay 1 milyan oo xaaladood markii coronavirus ku faafay gudaha dalka
Ra’iisul Wasaare khayre oo kulan laqaatay Hoggaamiyaha Ahlusunna
Qarax seddexaad oo ka dhacay Muqdisho iyo Faahfaahin ku saabsan